I-Bitcentral's Media Workflows Isiza Abadali bokuqukethwe Batshele Ngaphezulu Izindaba Zokubandakanya | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Okufakiwe » I-Bitcentral's Media Workflows Isiza Abadali bokuqukethwe Batshele Ngaphezulu Izindaba Zokungena
I-Bitcentral's Media Workflows Isiza Abadali bokuqukethwe Batshele Ngaphezulu Izindaba Zokungena
Emhlabeni wemidiya yedijithali, isidingo sokuqukethwe siyakhula, futhi ukuphathwa kwako kuya kufuna kakhulu. Lokho kuya okuphindwe kabili kubadali bokuqukethwe abalwela nje kuphela ukuxoxa izindaba ezibandakanya kakhulu kepha futhi nokuhlobisa izilaleli ezihambisana nomlayezo oyinhloko wohlobo lwabo. I-Bitcentral uchwepheshe emkhakheni wokuhamba komsebenzi wemidiya nezixazululo ezenziwe ngezifiso ezisiza okuqukethwe kwevidiyo ukufezekisa inani layo eliphezulu. Eqinisweni, imikhiqizo embalwa yenkampani iye yabonakala isebenza kahle kakhulu lapho isiza abakhi bokuqukethwe embonini yezokusakaza ekwakheni okumangazayo uma kungenjalo okuhlanganisa okuqukethwe kwevidiyo.
Ngaphezu kweminyaka engamashumi amabili, I-Bitcentral uhlinzeke ukusebenza ngempumelelo kwemidiya nezixazululo ezenziwe ngezifiso kubasakazi abafuna ukuthuthukisa inani lokuqukethwe kwevidiyo yabo. Lesi sixazululo sale nkampani i-Core News solution iyisikhulumi sezindaba sokukhiqiza esingu-1 e-US, sifinyelela izigidi zonke izinsuku. Elinye ikhambi, Ukulawulwa Okuphakathi ihlinzeka ngesethuluzi eliguquguqukayo lokusebenza kokulawula okuhle ngamamojula ukwenza zonke izinqubo eziguqukela ekudlaleni. FUEL, ikhona Bitcentral's I-Linear emisha esebenza kahle kakhulu futhi eshintsha embonini.
Imisebenzi engaphezu kwenkulungwane yokusakaza komhlaba incike Bitcentral's ukukhiqizwa kwezindaba kanye nesoftware yokulawula ezenzakalelayo. Futhi ngosizo lwe FUEL, manje bayakwazi ukukhomba futhi balethe okuqukethwe okwenziwe ngezifiso kuwo wonke amapulatifomu edijithali afana ne-OTT, iwebhu, izinhlelo zokusebenza, amadivayisi eselula, kanye nabezindaba zenhlalo nokuvumelanisa.
Eziningana I-BitcentralIzisombululo zezici zifaka:
Ukulawulwa Kokuzenzakalelayo & Nezenzakalelayo
Kusukela ngonyaka ka-2000 nangonyaka olandelayo, I-Bitcentral kufakazelwe ukuthi kuyinkampani ehola isoftware nekhono lokukhulisa imikhiqizo esiza abasakazi abaqeqeshiwe ukuphatha kangcono ukuhamba komsebenzi ngemuva kokuqukethwe kwabo. Eminye yale mikhiqizo ifaka:
Bitcentral's Prism isebenzisa ipulatifomu ye-NRCS eguquguqukayo enekhono lokuxhuma izintatheli, abakhiqizi nabaqondisi ezindabeni ezidinga ukutshelwa. Lesi sigcawu senza ukusebenzisana egumbini lezindaba kuyo yonke inqubo yokukhiqiza. Futhi lokhu kuhlangana kufaka ukushicilelwa kokuqukethwe okungaphezulu kokungahloniphi kwezithameli ezijwayelekile mayelana newebhu kanye nabezindaba zenhlalo. Ubuciko bokwakha obuguquguqukayo ngemuva Prism inika amandla amaklayenti angaphakathi kwigumbi lezindaba nakulo lonke uxhumano lwe-WAN ukufaka isandla ezindabeni njengoba zikhula. Prism kwethulwe epulatifomu ejwayelekile, futhi izici zayo zingangezwa kalula ukubhekana nanoma ikuphi ukukhathazeka kwegumbi lezindaba.
Funda kabanzi ngePrism ngokuvakashela kancane.com / product / prism /.
Bitcentral's Uhlelo lokuphathwa kwempahla ye-Oasis isebenza njengohlelo lokudlulisa ifayela oluphethwe ngokuvikelekile oluvumela abasebenzisi ukuthi banikele kusuka laptops, amaphilisi, kanye namadivayisi eselula ukuze balandise izindaba ezibandakanya kakhulu nezicindezelayo. Inzuzo enkulu ye Oasis kuqhamuka ekufunweni kwezinhlelo ezisezingeni eliphakeme ezisezingeni eliphakeme, ezingakaze zibe nolaka kangako, futhi kube nomphumela ekwakhiweni nasekusakazweni kwezindaba ezinyanzelayo ngezinga elisheshayo kakhulu kunangaphambili. The Uhlelo lokuphathwa kwempahla ye-Oasis yabiwe ngokuphephile kuzo zonke iziteshi ezigunyaziwe futhi iyatholakala kubasebenzisi bendawo yokulayisha noma yokulanda okuqukethwe ukusiza ekwenzeni kwabo izindaba ezikude.
Funda kabanzi nge-Oasis ngokuvakashela kancane.com / product / oasis /? utm_source = nabweb.
Bitcentral's multipath yenziwa ngqo njengemodyuli yokuthuthukisa i-Oasis MAM. IMultiPath's uhlelo lokusatshalaliswa kwedijithali yevidiyo luhlangana ne I-Bitcentral's suite ephelele yamathuluzi okukhiqiza izindaba, evumela ukuthi ukusakaza amapulatifomu kukhule ngaphezu kwamazinga endabuko. Bitcentral's multipath ivumela ukuthi yonke into ihlanganiswe esifundweni esisodwa esinikeza umbono ophelele wenqubo ephelele yokushicilelwa kwabezindaba. Ngemuva kokuthi umcimbi wokushicilela wenziwe, isikhombimsebenzisi esihlelekile nesinengqondo siqondisa umsebenzisi ekukhetheni nasekuphatheni imicimbi eminingi yokushicilela, ukuqondiswa kwe-OVP's, CMS, kanye nama-akhawunti wezindaba zokuxhumana.
Funda kabanzi Bitcentral's IMultiPath ngokuvakashela kancane.com / product / multipath /.
Ukulawulwa Okuphakathi iyi-master control eqoqiwe futhi ehlanganiswe ngokuphelele ne-automation software. Inika isethi yamathuluzi eyakhiwayo eyakha zonke izinqubo eziguqukela ku-playout eziqondisa imizamo yabasebenza ngaphandle kokuyekethisa ukusetshenziswa. Le software inikezela abasebenzisi ngeziteshi ezigcwele eziqondile, futhi lokho kufaka phakathi ukuhlanganiswa kwethrafikhi, impahla yemidiya noma ukuphatha isitoreji, ukuhlelwa kohlu lwadlalwayo okungaxhunyiwe ku-inthanethi, ukufakwa kukhathalogu kohlelo, ukuhlelwa kwemidiya / ukuhumusha, ukuqapha kohlelo nokubika, ukucubungula okuqukethwe okuqukethwe, nokuqoshwa kokuphakelayo okuzenzakalelayo. Kungukuhamba kokuhamba komsebenzi okusebenza kahle kakhulu ukusakazwa ngabasakazi.
Funda kabanzi mayelana nokulawula okuphakathi ngokuvakasha kancane.com / product / central-control /? utm_source = nabweb.
Ukubuya ku FUEL, lokhu kusakazwa kwedijithali kanye nekhambi lokwenza imali kunesikhathi eside kunazo zonke emakethe. Inikeza okuphindwayo kweshumi kwabanikazi bezithameli, abahlinzeki bokuqukethwe, nabakhangisi. Futhi alikho elinye ipulatifomu lokusakaza elihambisa emuva elivumayo, isipiliyoni sokuzibandakanya esilingana neso FUEL, ezinika amandla iziteshi eziguquguqukayo epulatifomu esekwe efwini enezici ezibandakanya ukujoyina ukuqhubeka, ukubanda okuvulekile, amandla okufaka okuqukethwe okubukhoma, futhi akukho ukukhishwa kwangaphambili okuxosha ababukeli. Izikhangiso eziyizixazululo azithinti izimbangi zezikhangiso, futhi zifakwe ngaphandle komthungo ekusakazweni okuphephile komkhiqizo okuqukethwe ababukeli abakujabulelayo ukukubuka kungakhathalekile isikhathi nendawo, nakuwo wonke amapulatifomu.
Funda kabanzi nge-FUEL ngokuvakashela kancane.com / product / fuel /.
Kungani Abasakazi Kufanele Bahambe Na I-Bitcentral
Noma yimuphi umsakazi osakazwayo angadala umugqa wokuqukethwe okumangazayo nokubuka ngokusobala ividiyo. Isinyathelo esilandelayo ukuphatha ukugeleza komsebenzi njengokufunwa kokuqukethwe, nenkampani ehola isoftware efana I-Bitcentral kungasiza ngalokho. Noma ngabe yimikhiqizo noma izixazululo zawo, okuqukethwe kwevidiyo okwenziwe ngulwazi olusakazwayo kunakho konke ongakuthola uma kuziwa kubuchwepheshe I-Bitcentral futhi kunikela emkhakheni wedijithali imboni yezokusakaza iyachuma futhi inwebeka kuwo.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana I-Bitcentral, vakashela kancane.com /
I-Bitcentral Injini yokusakaza imboni yokusakaza ICentral Management ™ sokuqukethwe Abadali bokuqukethwe Isixazululo seCore News ™ izixazululo ezenziwe ngezifiso I-Digital Media uhlelo lokudlulisa ifayela FUEL Linear on Demand master control ezenzakalelayo ukuhamba komsebenzi kwabezindaba multipath Ipulatifomu ye-NRCS Uhlelo lokuphathwa kwempahla ye-Oasis Prism ukukhiqizwa kwendaba okukude ezokuxhum kanye nokuvumelanisa 2020-05-08
Ngaphambilini: Umhleli wevidiyo
Olandelayo: I-PSA Shot entsha ka-ProBalance entsha futhi iboshwe ngamakhamera we-Blackmagic Design kanye ne-DaVinci Resolve